Honor Play - Lalao Phone Review - News Fitsipika
Honor Play – Lalao Phone Review
Tao anatin'ny telo taona, Ny Honor Huawei dia nanao anarana ho azy amin'ny finday tsara izay nampisy fiantraikany lavitra kely noho ny antsasaky ny vidin'ny farany ambony-mpifanandrina. Ny voninahitra lehibe iray hafa Play no fidirana ao amin'ny tsipika niaritra na dia tsy.
Huawei ny farany dia tonga noho ny vy svelte vatana sy tsara efijery, ary mety ho mendrika hihiaka ny mpampiasa ankapobeny ary koa ny mpilalao
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Honor Play hevitra: lalao finday izany hoe mpiady varotra tsy misy rehetra-rounder” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Alarobia 5 Septambra 2018 06.00 UTC
Huawei voninahitry zana-marika dia nitifitra avy finday lehibe amin'ny tahan'ny fatotra, miaraka amin'ny Honor Play ny farany indrindra amin'ny tsipika ny vola lany ambany-ambony-spec finday.
Ny Play tsy hihataka amin 'ny fandresena raiki-pohy ampiasaina araka ny fara-tampony vitsivitsy farany Omeo voninahitra ny finday avo lenta: ny flagship processeur, betsaka ny fahatsiarovana sy ny fitehirizana, efijery lehibe iray sy ny bateria fiainana tonga tsara ho any amin'ny andro faharoa.
Eny ivelany dia ny Play Remix ny karazana eo amin'ny Honor 10 sy ny notched lamba sy ny vy unibody ny Honor 10 View (izay manjavozavo navoaka teo anoloan'ny-boninahitra 10).
Ny curved lafiny metaly sy ny Antenna andalana dia mampahatsiahy ny iPhone 7, tanteraka tamin'i headphone faladiany. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny vokatra azo dia tena malamalama sy ny fihetseham-po mafy orina-tariby mampahatsiahy ny iPhone 7, miaraka amin'ny vy tsotra indray ary aloha ny lamba fanakonana anjakan'ny. Glass Mety ho ilay fanazavana ny fotoana, fa ny Honor Play dia iray amin'ireo fihetseham-po tsara indrindra finday tamin'ny tanako dieny izao.
Ny feno LCD HD + fanakonana dia lehibe, mamirapiratra sy miavaka amin'ny lafiny mijery tsara, fa izay koa ny lavany, ary somary tery, izay mahatonga azy somary mora mizara tsara.
Ny notch lehibe tao an-tampon'ny efijery misy ny selfie fakan-tsary, Sela Mpandray Hafanana sy earpiece mpandahateny mahazo an-dalana mihoatra noho Tiako. Amin'ny Bluetooth écouteur mifandray, ny telefaonina napetraka mba vibrate sy mifandray amin Wifi tsy misy toerana ao amin'ny sata bara na inona na inona fampahafantarana sary masina.
Tamin'ny 7.5mm matevina sy 176g amin'ny lanja, ny Play mifanitsy ny tsara rehetra ny tampony-end fifaninanana. Misy ny headphone faladiany sy ny USB-C seranan-tsambo ao ambany, kely lafiny roa-fakan-tsary vongana sy tena tsara tondro scanner ao ambadika.
Screen: 6.3in FHD + LCD (409ppi)
Processor: Oct-fototra Huawei Kirin 970
Storage: 64GB + microSD karatra slot
Rafitra fikirakirana: EMUI 8.2 mifototra amin'ny Android 8.1 oreo
Camera: Dual aoriana fakan-tsary 16MP + 2MP, 16MP anoloana-miatrika fakan-tsary
Fifandraisana: Dual SIM LTE, Wifi, NFC, Bluetooth 4.2 ary ny GPS
Lalao fampisehoana dia mafy sy hery mahomby, fa amin'ny fomba maro ny Honor Play dia tsara kokoa manodidina rehetra-tariby noho ny lalao mety hanehoana-barotra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Play manana ny voninahitra mitovy Huawei Kirin 970 processeur sy 4GB ny fahatsiarovana toy ny Honor 10, ary manao toy izany koa amin'ny andro-to-day fampiasana. Mahatsapa ny telefaonina snappy, Apps hanomboka haingana sy ireo fampiharana ara mafy eo, raha tsy izany tena amin'ny feh miaraka amin'ny OnePlus 6.
Lalao fampisehoana dia mafy fa tsy miavaka ao amin'ny fitiliana: 30 minitra stints ny Shadowgun Legends dia somary malefaka sy ho levona ihany 0.5% ny bateria isa-minitra. Fa raha oharina, toy izany koa mihazakazaka amin'ny lalao Google Pixel 2XL lany ritra 1% isa-minitra, fanaovana ny Voninahitra Play avo roa heny toy izany koa mahomby ho an'ny fampisehoana.
Raha jerena dia telefaonina marketed ny lalao, fa mahamenatra ny Play tsy manana Stereo miteny, fa ny iray, fara fahakeliny, any amin'ny farany ny telefaonina no tena mafy.
Battery ainy hamonjy ny Play avy niasa kely Omeo Voninahitra ratsy lavitra noho ny hafa Kirin 970-Powered finday. Tsy naharitra eo ho eo 28 ora eo fiampangana, manomboka amin'ny 8am indray andro, ary manao izany amin'ny alalan'ny hatramin'ny andro antoandro tamin'ny roa.
Izay teo raha mampiasa azy io ho toy ny fitaovana voalohany indrindra, Browsing sy ny fampiasana fampiharana ho an'ny dimy ora raha nahazo an-jatony hanoto mailaka sy hafatra, mamaky Comics for 30 minitra, milalao lalao for 30 minitra, nitondra ny 20 sary sy mihaino mozika fito ora alalan'ny Bluetooth écouteur.
EMUI 8.2 manome anao ny safidy ny iPhone fomba nentim-paharazana na mihoatra Android fomba homescreens. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
ny voninahitra 10 Huawei mitantana ny farany dikan-Android atao hoe EMUI 8.2, miankina amin'ny Android oreo 8.1.
Ny dika mitovy indrindra toy ny mihazakazaka ny Honor 10, mijery toy ny hazo fijaliana eo amin'ny Android sy ny iOS Apple ny.
EMUI ahitana ny safidy mba mifamadika eo amin'ny manana ny fampiharana vatasarihana na manana rehetra amin'ny fampiharana ny homescreen. Ny Google App ny manokana fahana tsy ampy amin'ny ankavia-tena homescreen pane, ary ny fampahatsiahivana manana karatra boribory kokoa fijery, mitovy amin'ny vao haingana navoaka Android 9 henan'omby.
Ny notch Azo nafenina tany an-maharitra sata mainty fisotroana, ary maro ireo hery-mamonjy Afaka mampihetsika endri-javatra raha toa ka mila ny telefaonina mba haharitra raha mbola araka izay azo atao.
EMUI 8.2 dia arguably ny tsara indrindra dikan-Huawei ny rindrambaiko mbola, satria mainka ny Marmite traikefa ho an'ny ankamaroan'ny, fa mihazakazaka amin'ny tamin'ny taona lasa ny Android oreo fa tsy ny vaovao Android 9 Pie dia mandiso fanantenana kely, raha tsy izany an-tariby tsy nampoizina ho nanomboka tamin'ny volana Aogositra.
Ny fakan-tsary dia fampiharana mivantana sy mora ampiasaina, fa vonoy ny AI fankasitrahana ho an'ny toe-javatra tsara kokoa sary. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny fakan-tsary eo amin'ny lafiny roa amin'ny Play indray dia mitovy amin'ny teo aloha Honor modely, fa tamin'ny fanapahan-kevitra ambany-2-megapixel faharoa fakan-tsary izay fotsiny any halalin'ny fomba fijery ny milalao bokeh amin'ny sary. Voalohany 16-megapixel fakan-tsary dia manana ny AI Omeo Voninahitra ny rafitra avy amin'ny Honor 10.
Ny fakan-tsary dia afaka fakàna antsipirihany sary, na dia ao anatin'ny hazavana middling tsy misy ny rafitra AI niverina tamin'ny. Tsy Tena amin'ny feh amin'ny tsara indrindra ny tsara indrindra, nefa koa tsy hoe lavitra.
Miaraka amin'ny rafitra AI mavitrika, izay natao mba mamantatra zavatra, ary manatsara ny fakan-tsary ny hanitry, loko nijery fotsiny oversaturated, toy ny hoe izy ireo no efa nandeha namaky ny Instagram sivana.
Ny 16-megapixel selfie tena fakan-tsary dia tena tsara koa, tsipiriany bebe kokoa ny fisintonana ny lavitra teo aza toy izay £ 1000 finday. Ny sasany dia mety tsy hahita kilema rehetra sy ny fakàna fiketronana mandrobo rehetra, fa rehefa ianao dia afaka mahita ny taratry ny telefaonina ao amin'ny family ny masonao any amin'ny selfie, Mino aho fa ianao eo ny mpandresy. Azonao atao ihany koa ny manampy ny hatsaran-tarehy ambaratonga isan-karazany ny fomba mitovy tantana ny hoditra.
Ny tondro scanner ao ambadika dia mbola iray amin'ireo tsara indrindra eo amin'ny raharaham-barotra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny feo Histen Huawei dia afaka simulate hafa fanodinana 3D feo, toy ny fitenenana napetraka eo anatrehanao, fampiasana tsy tapaka Wired écouteur
-Peo no mampihovotrovotra in lalao dia fohy, maranitra ary mafy maso
Tafiditra amin'ny raharaha TPU mazava ao amin'ny boaty
Ny endrika Huawei fankatoavana tena haingana, na dia ny tondro scanner kokoa azo antoka
Play ny voninahitra vola lany £ 279,99 ary misy amin'ny manga na mainty.
Fa raha oharina, ny 5.9in Honor 10 ny vidin'ny £ 400 amin'ny 128GB ny fitehirizana, ny 6in Honor 10 View ny vidin'ny £ 450 amin'ny 128GB, ny 6.1in Huawei P20 Pro ny vidin'ny £ 799 amin'ny 128GB, ny 6.28in OnePlus 6 ny vidin'ny £ 469 amin'ny 64GB, ny 6.2in Samsung Galaxy S9 + ny vidin'ny £ 869 amin'ny 128GB, ny 6in Google Pixel 2 XL ny vidin'ny £ 799 amin'ny 64GB, ary ny 5.8in iPhone X ny vidin'ny £ 999 amin'ny 64GB.
Izany dia midika hoe tsara sy mahatsapa nanao lehibe, manana tsara efijery, bateria tsara ny fiainana, mahay mandanjalanja fakan-tsary, Tena lehibe tondro scanner ao ambadika sy ny be dia be ny endri-javatra nanampy sarobidy-. Mbola mandeha Android 8.1 oreo, tsy ny vaovao Android 9 henan'omby, ary tsy ampy ny rano fanoherana, nefa vitsy finday avo lenta amin'ny vidiny io bracket manana izany.
Ny hany olana dia iza amin'ireo telo Kirin 970 Omeo voninahitra finday no tsara indrindra, tahaka izy rehetra nifaninana amin'ny izy samy izy, ary tsara tarehy toy izany koa. Amin'ny £ 120 tsy ny Honor Play mba haka ny satro-boninahitra teo amin'ny Honor 10.
Raha tadiavinao vy £ 280 finday ambany izay mahazo fotsiny ny fototra tsara, ny Honor Play Tena tokony ho eo amin'ny lisitra.
Mahatsara: mendrika ny fiainana bateria, tsara fampisehoana, mendrika fakan-tsary, tsara efijery, Premium mihevitra, sim lafiny roa fanohanana, headphone faladiany, mahomby lalao
Maharatsy ny mifampiresaka: tsy misy rano fanoherana, tsy Wireless fa mamaly ny, AI matetika mahatonga ny fakan-tsary ratsy, tsy Bluetooth 5 fanohanana, ihany no Android 8.1 oreo
Ny saoka kely eo anoloana no somary saro-takarina Honor famantarana eo ambany ny fitaratra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Lalao finday, voninahitra kilalao, Honor-Play-Famerenana
← Fitsapana voalohany indrindra amin'ny ny vokatry ny Microdosing LSD Set manomboka Microsoft tena toetrany Go Review →
Aho ny oncologist izay nahazo kanseran'ny nono. Izao no nianarako